Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Jasmine Women/Mo Li Hua Kai/茉莉花开/茉莉花開 (တရုတ်)
Jasmine Women/Mo Li Hua Kai/茉莉花开/茉莉花開 (တရုတ်)
မိသားစုတစ်စုထဲက မျိုးဆက် ၃ ဆက် ရဲ့အကြောင်းပါ။ မိခင်တွေရဲ့အမှားနောက်ကို လိုက်ခဲ့တဲ့ နောက်မျိုးဆက် ၂ ဆက်က သမီးတွေရဲ့ဘ၀ကိုရိုက်ပြထားတာပါ။ Ziyi တစ်ယောက်တည်း မျိုးဆက် ၃ ဆက်က အမျိုးသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
A story of love and loss over three generations of life inasingle family in Shanghai. Jasmine Women tells of the family's struggle to overcome its tragic history, as each daughter repeats the mistakes of her mother. Zhang Ziyi plays mother, daughter, and granddaughter as the film moves from the 1930's to the 1950's to the 1970's.
ရုံတင်သည့်နှစ် (Date of Release) - ၂၀၀၄ (2004) [တရုတ်နိုင်ငံ (China) - ၂၀၀၆ (2006)]
အမျိုးအစား (Gerne) - Romatic, Drama